IBhunga labaPhathiswa base-Italiya livume aManyathelo okuphucula uKhenketho ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » IBhunga labaPhathiswa base-Italiya livume aManyathelo okuphucula uKhenketho ngoku
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UMphathiswa wezoKhenketho wase-Italiya, uMassimo Garavaglia
IBhunga labaPhathiswa lase-Italiya liphumeze imilinganiselo yesiCwangciso seSizwe sokuBuyisa nokuBuyisela esixhasa amashishini okhenketho kweli lizwe.
I-191.5 yeebhiliyoni zee-euro kwizibonelelo ezinikezelwa ngeZiko lokuBuyisela nokuBuyisela.
Esi sicwangciso lungenelelo olujolise ekulungiseni umonakalo wezoqoqosho nentlalontle obangelwe ngubhubhani.
Inkxaso-mali ibandakanya utyalo-mali kwi-2 amacandelo abalulekileyo e-Italy, oko kukuthi ukhenketho kunye nenkcubeko, usebenzisa indlela yedijithali yokuqaliswa kwakhona.
ISicwangciso seSizwe sokuBuyisa nokuBuyisela (i-NRRP) esiziswe yi-Italiya sicinga utyalo-mali kunye nephakheji yohlaziyo engaguqukiyo, kunye ne-191.5 yeebhiliyoni zeerandi kwizibonelelo ezinikezelwa ngokuBuyiselwa kunye noBuyiselo kunye ne-30.6 yeebhiliyoni zeerandi ezixhaswa ngemali ngeNgxowa-mali eyongezelelweyo esekwe nguMthetho we-Italian Decree-Law. No. 59 kaMeyi 6, 2021, ngokusekelwe kulwahlulo lwebhajethi yeminyaka emininzi evunyiweyo yiBhunga labaPhathiswa baseItali ngo-Aprili 15.
Isicwangciso siphuhliswe malunga neendawo ezi-3 ezicwangcisiweyo ezabelwana ngazo kwinqanaba laseYurophu: ukufakwa kwedijithali kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha, inguqu yendalo, kunye nokubandakanywa kwentlalo. Lungenelelo olujolise ekulungiseni umonakalo wezoqoqosho nentlalontle obangelwe yingxaki yobhubhani, igalelo ekujonganeni nobuthathaka bobume boqoqosho lwase-Italiya, kunye nokukhokela ilizwe kwindlela yenguqu yendalo kunye nokusingqongileyo kwaye inemishini emi-6 ebandakanya ukhenketho.
"I-Digitization, i-Innovation, uKhuphiswano, iNkcubeko" yabela i-49.2 yeebhiliyoni zeedola (apho i-40.7 yeebhiliyoni e-R8.5 isuka kwi-Recovery and Resilience Facility kunye ne-2 yeebhiliyoni zeebhiliyoni ezivela kwiNgxowa-mali eYongezelelweyo) ngenjongo yokukhuthaza inguqu yedijithali yelizwe, ukuxhasa ukutsha inkqubo yemveliso, notyalo-mali kumacandelo angundoqo ama-XNUMX e-Itali, oko kukuthi ukhenketho nenkcubeko; ngamanye amazwi, indlela yedijithali yokuqaliswa kwakhona kokhenketho kunye nenkcubeko.
UMongameli we I-Federalberghi, Umbutho wehotele welizwe waseItali, uBernabo Bocca, uthe le yinaliti ebalulekileyo yokuzithemba kumashishini kunye nabasebenzi, kwaye wabulela uMphathiswa wezoKhenketho wase-Italiya, uMassimo Garavaglia, ngokwamkela isicelo seFederalberghi. UBocca waqhubeka wathi:
“[Oku] kukukhuthaza ukuzithemba okubalulekileyo kumashishini okhenketho nakubasebenzi. Amanyathelo abonelelwe ngumyalelo anika igalelo elibalulekileyo ekuqaliseni kwakhona, njengoko bexhasa ukuphuhliswa kwakhona kweendawo zokuhlala, kunye neminikelo engahlawulekiyo kunye nekhredithi yerhafu, kunye nokukhapha ukuhlawulwa kwekhredithi, ukuqinisekisa[ukuqhuba] ishishini kwiinkampani. kwicandelo lezokhenketho kunye nokuqinisekisa iimfuno zokuhlawula amatyala kunye notyalo-mali.
"Sibulela uMphathiswa uGaravaglia ngokwamkela izicelo zeFederalberghi, ukusebenzisa izixhobo zokunceda iinkampani zoyise esi sigaba esisenzima, kunye nokwenza utyalo-mali oluyimfuneko ukukhuphisana nokhuphiswano oluqatha lwamazwe ngamazwe."